Namela Lova Maharitra sy Mampivarahontsana i Tompokolahy Islam Karimov Filohan’i Ozbekistan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Oktobra 2016 12:26 GMT
Islam Karimov, Filohan'i Ozbekistan teo aloha.
Mifanohitra amin'ny an'ireo faritra mpifanila vodirindrina aminy, tsy mba nila nanangana tsangambato hankalazàna azy ilay Filohan'i Ozbekistan teo aloha, Islam Karimov—izay nalevina tao amin'ny tanàna nahaterahany, tao Samarkand, ny 3 Septambra. Karazany tsy be kinendinendina ary navesatry ny famoretana, ny fombany feno didy jadona, izay nataony nandritra ny fitondrany efa ho telopolo taona. Naverimberin'i Karimov, izay 78 taona tamin'ny nahafatesany, ny valinteniny hentitra tamin'ny fanontanian'ilay filaozofin'ny fahaterahana tao Italia, Niccolo Machiavelli: zava-dehibe kokoa ho an'ny mpitarika ny atahorana noho ny lalaina.
Fototr'ireo nofy ratsy izay hany zavatra kely mba fantatry ny tany hafa ivelan'i Ozbekistan momba an'i Karimov, izay nitondra an'i Ozbekistan nandritra ny 27 taona ary tsy nanaiky mihitsy ny hisian'ny fanoherana. Io no lehilahy nandidy ny hery famoretana nandatsa-drà nanjo ireo mpanao fihetsiketsehana tao amin'ny tanàna fivarotan'i Andijan ny taona 2005, nahafatesana olona 187 araka ny fanisan'ny governemanta azy ary mbola mihoatra noho izany araka ireo fanisàna tsy ofisialy. Io no lehilahy nolazaina ho nandoro ireo sasantsasany amin'ny mpifaninana aminy ara-politika tao anaty menaka, ary nametraka ny zanany vavimatoa —izay mpihira mihetsiketsika sy mpandraharaha, niaraka tamin'ny fanànany maro karazana— tamin'ny trano tsara miambina, ary mbola any hatramin'izao.
Fony izy nihaona tamin'ny Sekreteram-panjakana Amerikana, John Kerry, tao anaty fiaramanidina, tany amin'ny tanàna fonenany ny volana Novambra lasa teo, azo sary nanao satroka mainty ary akanjo mafana mainty i Karimov. Endrika Raibe no nasehony, mpvarotra fahafatesana. Kanefa tian'ny olona izy any Ozbekistan—mety hoe vokatry ny tahotra angamba izany—ary raha tsy tiana izy, farafaharatsiny ekena.
Ho an'ny fahantrana lalina, ny kolikoly amin'ny lafiny rehetra ary ny fandrahonana ankolaka-nà herisetra niharetan'ireo Ozbek tsotra nandritra ny fitondràny, efa filoha i Karimov fony izy ireo niteraka ny zanany voalohany, ary mbola filoha ihany izy rehefa lasa dadabe sy bebe ireo zanany ireo. Ary ao aminà firenena izay omena hajany sy inoan-teny ny olona lehibe taona, dia sady be taona izy no nanana fahefàna be nandritra ny fotoana naharitra ela.
Nanoratra tao amin'ny Facebook taorian'ny fandevenana azy, voamariky ny olona fa nohazavain'ilay Ozbek mpamakafaka ara-politika ireo antony maro be nahatonga ireo olon-tsotra nivoaka teny an'arabe hijery ny fatin'i Karimov nandalo—ny sasany nitomany :
Te-hamaly am-pahibemaso aho ho an'ireo tsy Ozbek mieritreritra hoe aorian'ny fahafatesan'ny mpitondra izay nanana laza niteraka resabe, tokony hankalaza eny an'arabe izahay […] Ireo Ozbeks manao fisaonana ankehitriny dia tsy manao izany noho ny antony politika fa noho ny antony maha-olona, araka ny eken'ireo Ozbek, hoe mangina sy manaja, manamarika ny fahalasanan'ny olona iray, indrindra fa ny filoham-pireneny voalohany. Mbola ho tonga indray ny fotoana hamakafakana amin'ny hoavy ireo zava-bitany.
Miaina ao an-dakilasy sy eny rehetra eny i Karimov
Mety tsy hamela ny hanaovana famakafakàna tsy mitanila ireo zava-bitan'ny fotoana nitondràn'i Karimov aloha ny fanjakana Ozbek ato anatin'ny fotoana fohy. Raha toa izy ka nitsoaka ny mety nahafahany nanao izay hiondrehana amin'ny anarany nandritra ny fotoana niainany, manao izay ho vitany hanenjehana ny fotoana very ireo olona eo ambany fifehezany.
Efa nanondro ny tenany ho “toy ny ray” ilay azo heverina ho mpandimby an'i Karimov, Filoha mpisolo toerana, Shavkat Mirziyoyev. Notaterin'ny Eurasianet fa hatry ny nahafatesany, natokana hahatsiarovana ny fiainan'i Karimov ny tany an-dakilasy.
Voalaza ihany koa ho nanasazy olona ny fitondràna noho ny fanaparitahana “tsahotsaho” izay manohitra amin'ny filazàna ofisialy momba ny fahafatesan'i Karimov, tafiditra amin'izany ireo tsaho momba ny datin'andro nahafatesany, izay nahatonga fifamaliana be.
Islam Karimov araka ny nanaovan'ny mpanao hosodoko izay maniry ny tsy ho fantatra anarana.
Mety hoe mbola notazonina ho “velona” i Karimov, nihoatra ilay daty fony nilaza ny fahafatesany ny 29 Aogositra ilay mpilaza vaovao mitoetra ao Maosko manana mpifandray an-tranonkala ao anati'ilay firenena be tsiambaratelo, mba hanitàrana ny fitondràny hatrany amabadiky ny fahatsiarovana ny Faha-25 taonan'ny fahaleovantenan'ny firenena, ny 1 Septambra. Noho ny antony ara-politika, mety nahemony hatramin'io na tsy afaka aza izy ny tena marina.
Fa inona ny hoavy tsy misy azy?
Angano milaza fahamarinan-toerana
Naverimberina foana matetika, tao aminà firenena mitoka-monina, ireo fanamarihan'i Karimov manokana hoe ho tafalatsaka ao anaty fahapotehana sy rà latsaka i Ozbekistan raha entina governemanta hafa, hany ka lasa nieritreritra izany ho tena zava-misy ny maro, na sarotra tadiavina aza ny porofon'izany. Noho io antony io, mbola hitohy eo ambanin'ny governemanta teo aloha ihany ny fitantanana an'i Ozbekistan.
Mbola ho eo ambany fahefan'i Rustam Innoyatov, 72 taona, lehilahy izay mifanaraka amin'ny an'i Karimov ihany ny fahelany teo amin'ny tampon'ny toerana politika Ozbek, ny fitantanana ny SNB, sampana fiarovam-pirenena izay tena matanjaka indrindra ao Azia Afovoany. Toa tsy hihemotra na hiova velively izany mihitsy ny polisim-panjakana izay napetrak'izy ireo miaraka raha mbola velona koa i Innoyatov .
Mirziyoyev, izay tena tànana an-kavanan'i Karimov, teo amin'ny toeran'ny praiminisitra hatramin'ny taona 2003, o hanohy hanamafy ny fahazoan'ireo vitsy an'isa tombontsoa fa tsy ny maro, amin'ny maha-filoha azy.
Hitohy ho voahitsakitsaka hatrany ireo fahalalahan'ny olom-pirenena ary hatao sorona ho amin'ny anaran'ilay lazaina ho “fahamarinan-toerana” manjavozavo ny mety ho fampandrosoana ara-toekaren'ny firenena, teny malaza fampiasan'i Karimov matetika, ary tsy isalasalàna fa hampaharitra azy.
Karimov, toy ireo hafa mpanao jadona, dia namolavola tantaranà fahamarinan-toerana, raha toa ka nanao betsaka hanapotehana azy io. Tena fihatsarambelatsihy lalina tokoa ho anà lehilahy izay lazaina ho Silamo, izay nanao ny fianianana naha-filoha azy teo ambonin'ny Korano ary ankehitriny manana maoske any Tashkent nomena anarana ho fanomezam-boninahitra azy, ny nanaovany zavatra be dia be mba hamoretana ireo Silamo mifofotra amin'ny fivavahana ao amin'ny firenena misy vahoaka 32 tapitrisa, ny ankamaroany natao tamin'ny anaran'ny politikan'ny ady amin'ny fampihorohoroana.
Ary raha noarahabaina tamin'ny fahaizany mandrindra ireo fifandirana tena nisy teo amin'ireo sangany ara-politika isam-paritra sy ireo mpandraharaha tao amin'ilay repoblika, vao mainka nampaharitra ireny fifandirana ireny ny fahazarany milalao ny tsirairay avy any ambadika.
Ny farany, i Karimov dia nanamboatra Ozbekistan izay mitohy hatrany mivoaka amin'ireo tatitry ny Banky Iraisampirenena miaraka amin'ireo antontan'isa mahatalanjona momba ny fitomboan'ny PIB, izay maneho ny karazana boky fahandro mbola tsy hita na tamin'ny andron'ny Kaominista aza. Ozbekistan tena hafa mihitsy no nahita ny fifindran'ireo mpifindra monina avy any Rosia, izay mihoatra ny 2 tapitrisa ireo Ozbeks miasa any, nianjera im-betsaka, miaraka amin'ny vidin'ireo entany fanondrana.
Amin'izao manaraka izao, misy Ozbekistan mibanaka natao hanohina ilay Ozbekistan hoavy, ho amin'ny fiovàna ho tsara na ho ratsy. Mety tsy ho izao ankehitriny izao izany no hiseho, na atsy ho atsy, fa kosa indray andro any tsy maintsy hiseho.